10 यूरोपमा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थानहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 यूरोपमा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थानहरू
गोपनीयता, 5-तारा होटल सुविधा, लुभावनी दृश्य, र स्थान, अर्को 10 दागहरूले यो सबै पायो. यी 10 युरोपमा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थानहरू आश्चर्यजनक प्रकृतिले घेरिएका छन् र आश्चर्यजनक लाभहरू लिएर आउँदछन्.
1. फ्रान्स मा अद्भुत छुट्टी भाडा ठाउँ: प्रोभेन्स
ढुone्गाको कुटेजहरू, पुरानो फ्रान्सेली भिल्ला, सुरम्य डेन्टेलेस डे मोन्टमिराइल पहाडहरू, प्रोभेन्स को को छ 10 युरोपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छुट्टी भाडा स्थानहरू.
पहिले, लैभेंडर सुगन्धहरू ब्यूँझनु र रूखहरूबाट चेरी लिनु प्रोभेन्समा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू मध्ये एक हो।. दोश्रो, तपाईंको देशको घरको विन्डोजबाट सुन्दर मोन्ट भेन्टौक्सको प्रशंसा तपाईंले कहिल्यै छुट्टीको कुनै सपना भन्दा बढी पाउनुहुनेछ.
प्रोभेन्समा, तपाईंसँग छुट्टी भाडा आवास विकल्पहरू छन्: फार्महाउसहरू, भिल्ला, र आकर्षक कुटेजहरू. सबै छुट्टी भाडा पूर्ण रूपमा बच्चाहरू संग परिवार होस्ट गर्न सुसज्जित छन्, वा साथीहरूको समूह.
बाट $136 तेसका लागि2कोठा को अपार्टमेन्ट गर्न को लागी $350 एक भिला को लागी, हरेक रात.
2. इटाली मा युरोप मा सर्वश्रेष्ठ छुट्टी भाडा ठाउँ: टस्क्यानी
टस्कन वाइन भ्याली इटालीमा भाडाको भाडाको राम्रो ठाउँ हो. रेशमी पहाडहरू आरामदायी बिदाको लागि उत्कृष्ट सेटिंग हो. उदाहरण को रुपमा, Giglio को लुभावना टापु, वा La Verna मा फ्रान्सिसकन मठ, सुन्दर टस्कन क्षेत्रमा ठूलो राखिएका गतिविधिहरू हुन्.
यसबाहेक, बिहान उठे, देश फार्महाउस बाहिर टस्कनीको सुन्दर दृश्यहरु को लागी कदम – अमूल्य छ. यहाँ, तपाईं निजी ग्लास वाइनको साथ दाखमद्य चुलिंगबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, वा वाइन टूरमा जाँदै.
Villas, अपार्टमेन्ट, र कुटीजहरू.
$68 गर्न $200 हरेक रात.
बच्चाहरूको लागि गतिविधिहरू: निश्चित रूपले! जबकि वयस्कहरूले आफैंलाई सराहना गर्छन्, बच्चाहरूको पिस्टोइया वा क्याभलिनो मट्टिको जूलजिकल बगैंचामा ब्लास्ट हुन्छ मनोरञ्जन पार्क in Livorno.
3. बेलायतमा सर्वश्रेष्ठ छुट्टी भाडा स्थान: वेस्ट इ England्ल्यान्ड
आश्चर्यजनक तटवर्तीहरू, ढु stone्गाको कुटेजहरू, सुन्दर सूर्यास्त, र निर्ममता, दक्षिण पश्चिम इ England्ल्यान्डलाई अ the्ग्रेजी ग्रामीण इलाकामा उत्कृष्ट छुट्टी भाडा स्थान बनाउनुहोस्. साथै, को आकर्षक समुद्री तटहरू डेभन र डोर्सेट को बर्षो मा आफ्नो आकर्षण सुरक्षित छ र समय र नुन बतास को हात मा बहादुर खडा छ.
सुनौलो समुद्री किनारमा हिंड्दै, शिमोन ओल्ड ह्यारी चट्टानहरूको प्रशंसा गर्दै, वा जुरासिक तट, कुट्नु शहर कुनै पनि समय मा तोड्न. यहाँ रहँदा, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं प्रागैतिहासिक युगदेखि अन्तरालमा समयमै फिर्ता यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ 17th सताब्दी. ल्याण्डस्केपले तपाईंलाई इंग्ल्याण्डको यस भागमा समय र प्रकृतिको कथाहरू बताउँछ, जबकि थ्रेडेड वा परम्परागत ढु stone्गाको कुटेजले तपाईंलाई पश्चिम इ England्ल्याण्डको जीवन र संस्कृतिको बारेमा बताउँदछ.
त्यसैले, यदि तपाइँ अंग्रेजी संस्कृतिमा उत्सुक हुनुहुन्छ, उद्यान, वास्तुकला, र कथाहरू – त्यसोभए तपाईंले पाउनुहुनेछ कि पश्चिम इ England्ल्यान्डसँग युरोपमा केही भव्य भाडाहरू भाडाका ठाउँहरू छन्.
$70- 320 हरेक रात
4. स्विजरल्याण्डमा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थान: स्विस आल्प्स
अधिक संग 10,000 आवास विकल्पहरू, को स्विस आल्प्स यूरोप मा एक शानदार छुट्टी भाडा स्थान हो. स्विस आल्प्स आश्चर्यजनक पहाड श्रृंखला, सबै भन्दा राम्रो विचार प्रदान गर्दछ, परिदृश्य, ट्रेल्स, दृश्यहरु, बहुमुखी छुट्टी भाडा गुणहरू, यसले तपाईंको बंगारा खसाल्नेछ.
स्विस आल्प्समा छुट्टी भाडाको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू मध्ये कुनै कुनै स्वाद र समूहको लागि घर छ. परिवारका लागि, साथीहरूको समूह, बाहिरी तातो टबको साथ, चालेटहरू, पहाड वा उपत्यका दृश्यहरू - स्विस आल्प्स यति विविध छ कि तिनीहरू सबैका लागि उपयुक्त छुट्टी भाडा स्थान हुन्.
त्यसैले, अब तपाईले बिच छान्नु पर्छ अफ-द पिट गरिएको-पथ ठाउँहरू Lucerne जस्तै, वा झरनाहरूको उपत्यका, ताल Mag Magore या माउन्टेन दृश्य तपाईको सबैभन्दा अविस्मरणीय बिदाको लागि यात्रामा.
चालेटहरू, काठका केबिनहरू, घरहरू, वा अपार्टमेन्टहरू.
बाट $92 एक अपार्टमेन्ट को लागी $265 निजी रातो र तालको दृश्यको साथ घरको लागि प्रति रात.
5. फ्रान्स मा अद्भुत छुट्टी भाडा ठाउँहरू
फ्रान्स यूरोप मा एक छुट्टी भाडा गन्तव्य हो. धेरै धेरै सुन्दर र बहुमुखी ठाउँहरूको साथ, हामीले तपाईंको अर्को फ्रान्सेली छुट्टीको लागि केवल एउटा भयानक छुट्टी भाडा ठाउँ छनौट गर्न हामीलाई गाह्रो भेट्यौं.
उदाहरणका लागि, बिआरिट्जसँग सब भन्दा आश्चर्यजनक समुद्र तटहरू छन्, जबकि डोर्डोग्ने उपत्यकाले आश्चर्यजनक हिमाल र नदी दृश्यहरू प्रदान गर्दछ.
कि त छुट्टी भाडा स्पट तपाईंले छनौट गर्नुभयो, तपाईंको अद्भुत छुट्टी भाडा पूर्ण रूपमा सुसज्जित हुनेछ, राम्रो बगैंचा संग, र फ्रान्स को सबै भन्दा सुन्दर क्षेत्रहरुमा.
ब्रिटनीमा, तपाइँ छुट्टी भाडाको लागि महलहरू फेला पार्नुहुनेछ, वा सुन्दर तटमा निजी ट्रेलको साथ कुटेज.
$75 – $145 हरेक रात
एउटा ट्रेनको साथ पेरिसको यात्रा
6. चेक गणराज्यमा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थान: बोहेमिया
बोहेमियन स्विट्जरल्याण्ड यूरोप मा एक शानदार क्षेत्र हो. आश्चर्यजनक बलुवा पत्थर पहाडहरू र एल्बे नदीको दृश्यहरूको लागि धन्यवाद, चेक स्विजरल्याण्ड छुट्टीको स्वर्ग हो. यसरी, यो यूरोप मा एक भयानक छुट्टी भाडा ठाउँ हो.
यो ठाउँ महाकाव्य दृश्यहरु प्रदान गर्दछ, धेरै पैदल यात्रा, परिवार पिकनिक स्पटहरू, र पौडनको लागि एउटा नदी.
वन्य प्रकृतिसँग नजिकको आधुनिक घरहरू, र जीवन 100 मिलियन बर्ष. तपाईंको घर घरबाट टाढा भाडामा लिन डिनन शहर राम्रो ठाउँ हो.
$90 – $150 हरेक रात
7. अस्ट्रियामा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थान: स्टायरिया
दक्षिण पूर्व अस्ट्रिया मा स्थित छ, स्टायरियन अल्पाइन परिदृश्य अस्ट्रियामा सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरू मध्ये एक हो. त्यसैले, Styria यूरोप मा एक भयानक छुट्टी भाँडा स्थान हो: विचारहरु, हिमनदी, हरियो चराहरू, र प्राकृतिक प्रकृति.
भव्य दृश्यहरू र पर्वतारोहण ट्रेल्सको अतिरिक्त, Styria मा, तपाइँको भ्रमण पछि तपाइँ पूर्ण रूपमा आराम गर्नुहुनेछ प्राकृतिक थर्मल स्प्रि .हरू. वैकल्पिक, धेरै स्याउ रूख र दाखबारी को लागी धन्यवाद, तपाईं आफ्नो टाउको राख्न सक्नुहुन्छ, वा एक स्वादिष्ट पिकनिकको आनन्द लिनुहोस्.
काठका केबिनहरू, पोखरीसहित विला, चालेटहरू.
$65 – $200 हरेक रात
8. अद्भुत छुट्टी भाँडा स्थान: लन्डन
लन्डन यूरोपमा सबैभन्दा भव्य भाँडा भाडा स्थानहरू मध्ये एक हो किनकि यो अनन्त विकल्पहरूको शहर हो. यहाँ तपाइँ अद्वितीय र सुन्दर पड़ोसहरू पाउनुहुनेछ, बिभिन्न वास्तुकलाको साथ, संस्कृति, र भाइबस. नटि Hill हिल सपना छ, ह्याम्पस्टेड स्वास्थ्य परम्परागत र फूलेको छ, र केन्सिington्टन पोष्ट र ट्रेंडी हो. यी केवल केहि उदाहरणहरू हुन् तपाईंको घरबाट टाढाको अर्को छुट्टी भाडा बुकिंगको लागि भययोग्य ठाउँहरू.
यसबाहेक, लन्डनले यति धेरै ठाउँहरू प्रदान गर्दछ, बजार, संग्रहालयहरु, र कुनै स्वाद र छुट्टी प्रकार को लागी पार्क. त्यसैले, लन्डन एक को लागी एक निरपेक्ष जीत हुनेछ बच्चाहरूको साथ युरोपमा पारिवारिक बिदा: मनोरञ्जन पार्क, सर्वश्रेष्ठ पेस्ट्री पसल, र ह्यारी पॉटर कोर्स.
लन्डनको मध्यमा अपार्टमेन्ट भाडा, र लन्डन बाहिर घरहरु, depending on the zone.
9. जर्मनीमा अद्भुत छुट्टी भाडा स्थान: Bavaria
बावरिया जर्मनीको सब भन्दा सुन्दर क्षेत्र हो, विशेष गरी वसन्तमा. आल्प्सदेखि डेन्यूब नदी सम्म, संगीत, र बभेरियन डिसेकिसिज, गर्न धेरै कुराको साथ, एक 10-बभेरियामा दिन यात्रा यो शानदार ठाउँले प्रस्ताव गरेको सबै चीजको आनन्द लिन पर्याप्त नहुन सक्छ.
यसरी, तपाईंले बभेरियामा छुट्टीको लागि राम्रो योजना बनाउनु पर्छ. किनभने बवेरिया जर्मनीको मनपर्ने छुट्टी गन्तव्यहरू मध्ये एक हो, स्थानीय र पर्यटकहरूको लागि, छुट्टी भाडा केहि महिना अगाडि बुक हुन जान्छ. आवास बुकिंगको अतिरिक्त, तपाईंको बभेरियन छुट्टीको उत्तम बनाउन, अनुसन्धान गर्नुहोस् र शीर्ष साइटहरू र क्रियाकलापहरूको सूची सिर्जना गर्नुहोस् तपाईंले गर्नुपर्दछ, र एक सामान्य यात्रा कार्यक्रम छ.
Villas, अपार्टमेन्ट, र घरहरू.
$80- $350 हरेक रात
10. इटालीमा अद्भुत छुट्टी भाँडा स्थान: ताल नाइस
ताल कोमो इटालीको सबैभन्दा लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्य मध्ये एक हो. तथ्यको बाबजुद यो गर्मी मौसममा धेरै भीड हुन सक्छ, उत्साहजनक ताल र हिमाल दृश्य, शान्त वातावरण संग, लेक कोमो मा राख्नुहोस् 10 युरोपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छुट्टी भाडा स्थानहरू.
सबै भन्दा राम्रो समय लेक कोमोमा छुट्टी मार्चदेखि नोभेम्बर बीच हो, जब जुलाई-अगस्त सबैभन्दा तातो र व्यस्त महिनाहरू हुन्छन्. त्यसैले, यो अग्रिम मा तपाईको अनुसन्धान गर्न वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ. त्यसैले, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ताल मा एक छुट्टी भाडा बुक गर्न को लागी आवास र पेशेवर र विपक्ष जाँच गर्न हो, बर्षको कुनै पनि भाग को लागी.
लक्जरी विला, अपार्टमेन्ट, चालेटहरू, र कुटीजहरू.
$40 प्रति दिन $500 प्रति हप्ता
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 युरोपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छुट्टी भाडा स्थानहरू. गन्तव्यको लागि रेल यात्रा र घरबाट टाढा काल्पनिक घर यात्राको सब भन्दा चाँडो र सबै भन्दा सस्तो तरीका हो.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “1o भयानक भ्याकेसन भाडा स्थानहरू यूरोपमा” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)